Amaqela kunye neenkonzo
Inokuba yintoni imeko yokuthunyelwa kwempahla eyolukiweyo kunye neyengubo kwisiqingatha sesibini sonyaka?
ngomphathi ku 20-09-02
Ukuthengiswa kweempahla zase China kunye neempahla kwakungaqhelekanga kwisiqingatha sokuqala salo nyaka ngenxa yokusasazeka kwe-COVID-19. Ukungena ngoMeyi nangoJuni, ezinye iinkcukacha zithathile. Imeko iyonke kwisiqingatha sesibini sonyaka inzima kwaye iyatshintsha, kwaye kusafuneka sinike ingqalelo engakumbi kuyo. A ...
Isidlo sangokuhlwa sabasebenzi ngaphambi koMnyhadala weNtwasahlobo ka-2020, yonga amandla okwenza unyaka olandelayo wokuvuna!
Ekupheleni konyaka we-2019, siza kushwankathela umsebenzi walo nyaka uphelileyo, sigxininise ngokukodwa kwiingxaki zomsebenzi, kwaye masivumele wonke umntu akhumbule ukwenza umsebenzi ongcono kuNyaka oMtsha. abasebenzi, umphathi wemveliso, ukuthenga, i-QC, i-accountant, ezine ...
Umboniso woMlingo ngoFebruwari 2020
ngomphathi ku 19-12-17
Siza kuzimasa UMBONO WOBUGCISA ngoFebruwari 2020, Hlala ubukele iindaba zethu zamva nje.
Lo mboniso ubanjelwe eMoscow, eRashiya kwaye amanye amazwe akufutshane apho ayimakethi yethu yokuqala.Sinabathengi abaninzi abasebenza nathi ngaphezulu kweminyaka eli-10 Ngophunyezo lomgaqo-nkqubo we-One Belt kunye neNdlela enye e-China, sine Ndizise iimveliso ezikhethekileyo kumar ...
Siza kuya kwi-International Sourcing Expo e-Australia nge-20-22 Nov, 2018 eMelbourne. Indlwana yethu engu-V27 wamkelekile ukuba undwendwele umnquba wethu uyilo olutsha. Ndijonge phambili ukudibana nawe apho. Eli lixesha lethu lokuqala ukuya kumboniso waseMelbourne, abathengi kumboniso ...
Umboniso woMlingo 2018
Ukudibana noMboniso woMlingo eLas Vegas nge-11-14 Feb, 2018. Umnquba wethu ngu-63217-63218. Wamkelekile ukuba undwendwele umnquba wethu kwaye ujonge uyilo lwethu olutsha. Ndijonge phambili ekudibaneni nawe. Eli lixesha lethu lesine ukuya kulo mboniso, apho sisekele kwaye sagcina ubuhlakani nabanye ...
Idilesi:RM4A22, Ukwakha B, iZiko loRhwebo lwaMazwe ngaMazwe laseRitan, iSithili saseChaoyang, Beijing, China 100020
Inombolo kanomyayi: 0086-18515900837